Saturday June 19, 2021 - 19:14:45 in Wararka by Super Admin
Jabuuti(Xogreebnews)- Somaliland iyo Jabuuti, waa laba Dal oo wadaga Waxyaabo tiro badan, kuwasoo ay kamid yihiin Xuduudaha, Somalinimada, Afka iyo Walaaltimo qoto-dheer, wallow ay yihiin laba Dawladood oo ay soo kala gumaysteen laba dal oo kamid ah dalalka Yurub, kuwasoo kala ahaa Jabuuti waxa soo gumaytay Faransiis, halka Somaliland ay kamid ahayd Maxmiyadii Ingiriiska.
Cilqaadka Siyaasadeed ee Somaliland iyo Jabuuti waa mid waqti kasta 30-kii sanno ee u dambeeyey marba Heer tagnaa, waana mid kolba isbedbedela, isla markaana ku xidhan kolba dhaqdhaqaaqa Siyaasadeed ee geesta, hase-yeeshee Xidhiidhka Saaxibtimo ee labada bulsho iyo arrimaha kale ee Walaaltimo ee laba dal maha kuwo isbedela, balse waa kuwo mar kasta Walaalnimo iyo kalgacalkooda laga caajisin.
30-kii sanno ee Somaliland dib ula soo noqotay xornimadeeda, Xidhiidhka Saaxibtimo, Siyaasadeed ee Somaliland iyo Jabuuti ma jirto waqti ay ka wanaagsan tahay, waxanu Xidhiidhkani sadexdii sanno ee u dambeeyey maraaya meel aad u wanaagsan, waxanay labada dawladood guulo Diblumaasiyadeed oo is garabsiin ah ku talaabsanayeen sadexdaas sanno, kuwasoo isla qaan-qaadkoodu midaysnaa, waxa Siyaasada Geeska Africa kaga adkaadeen Dawlado waaweyn, oo aana magacooda halka doonayn inaan ku sheegno.
Guulaha Diblumaasiyadeed ee Somaliland iyo Jabuuti waxa sameeyey oo ku suntan labada Madaxweyne ee dalalkaan. Waxana soo sadexeeya, Safiir Somaliland u fadhiya Jabuuti Ambassador Cabdifatax Siciid Axmed oo ah shaqsiga haga Siyaasada labada dal, isla markaana si weyn isaggu xidha.
Kartida, daacadnimada iyo Firfircoonida shaqsiyadeed ee masuul qaran uga wakiil ah, qadiyada u baahan in laga dhaadhiciyo dal aan ku aqoonsanay iyo in lagu yeesho dalalka aduunka Saaxibo ku dhego-nugul, waa mid dhibkeeda leh, hadana waxa dayrarkaas dumiyay oo Somaliland u sameeyey Saaxibo, Masuuliyiin qaranku u xushay inay Iib-geeyan dedaalada qarankani ku jiro.
Hadaba, Waxaynu Qormadeenan Kusoo qaadan doonaa Waxqabad mug leh iyo Guulo diblumaasiyadeed oo ay gaadhay Safaarada Somaliland ku leedahay dalka Jabuuti, oo sadexdii sannadood ee u dambeeyey oo ay samaysay isbedel gaan-qaadhnimo ah, iyadoo uu kor-u-kacay heerkii Diblumaasiyadeed ee Somaliland ku dhex lahayd dalka Jabuuti, isla markaana Safarada Somaliland la siman tahay Safaaradaha kale ee Wadamada aqoonsiga haysta, ku leeyihiin Wadanka Jamhuuriyada Jabuuti.